रेल कुदाउने कुरा कहाँ पुग्यो सरकार ? « News of Nepal
रेल कुदाउने कुरा कहाँ पुग्यो सरकार ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अनेक सपनाका खजानाहरु नबनाएर करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ । यद्यपि सरकारको कार्यकाल झन्डै साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । यहीबीचमा सरकार अनेक काण्ड र पार्टीभित्रका गुटहरु मिलाउँदै बित्न पुगेको छ । यस्तैमासंसद्मा आव २०७७÷०७८ को प्रिबजेट छलफल चलिरहेको छ । हाल कोरोना संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेको छ ।
यद्यपि यसपालि सरकारले नेपालमा कृषि लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । नेपाल रेल, पानीजहाजलगायतका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको हबिगत अब के हुने हो ?
चीनजस्तो समृद्ध छिमेकी पाउनु हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो। तर छिमेकीको समृद्धिबाट कति र कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । चीनले नेपाललाई पनि आफ्नो समृद्धिको रेलमा सवार गराउन चाहेकै छ तर तानेर लाने होइन, रेल चढ्न आफैं सक्षम हुनुपर्छ।
नेपाल चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ पनि हुन सक्छ। चिनियाँ रेल नेपाल आउँदा यहाँ मात्र बस्दैन, शायद भारतसम्मै पुग्छ। भारत हुँदै अन्त पनि जान्छ। त्यतिखेर नेपाल दक्षिण एसियाको व्यापारिक केन्द्र पनि बन्न सक्छ।
त्यो रेल यहाँ आउँदा ठूलो जनसंख्या रहेको देशका पर्यटक भित्रिन्छन्। त्यसैले अहिले सबै नेपालीले सोधिरहेका छन्, ‘के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ?’ त्यसैले रेलमार्ग निर्माणको लगानी कस्तो र कसको हुने तथा कसरी निर्माण गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर जति सक्दो चाँडै पहिल्याउँदा राम्रो हुन्छ।
उखर्माउलो गर्मीमा सावधान
देशमा मनसुन आइपुग्न ढिलाइ हुँदा गर्मी व्यापक बढेको छ । उखर्माउलो गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु देखिन थालेको छ । तराईलगायतका केही जिल्लामा अत्याधिक गर्मी बढ्ने गरेको छ । गर्मीमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सके विभिन्न रोगको संक्रमणबाट जोगिन सम्भव छ ।
गर्मीका कारण डिहाइड्रेसन, लु, आँखा पोल्ने समस्या, फुड पोइजनिङलगायतको खतरा पनि बढ्छ । तीव्ररुपमा ब्याक्टेरिया गर्मीमा फैलिने गर्दछ । त्यसैले पनि आफैँ सचेत हुन आवश्यक छ । गर्मी लगत्तै वर्षात शुरु हुने हुँदा बाढी–पहिरोको समस्या पनि त्यस्तै देखिने गर्दछ । समग्रमा प्राकृतिक परिवर्तनको असर नेपालमा देखिँदै आएको छ । नागरिकमा चेतना बढ्न सकेमा गर्मीले व्यापक समस्या आउँदैन ।
तसर्थ, नागरिकले गर्मीको सावधानी अपनाउनुपर्छ । गर्मी याममा शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको हुन्छ । त्यसैले सामान्यजस्तो देखिने रोगले पनि चाँडै आक्रमण गर्छ । यस्तो बेलामा पानीको मात्रामा कमी आउन नदिने र सामान्य बिरामी हुँदा पनि अस्पताल जानका लागि स्वास्थ्य सचेतनाको जरुरी पर्दछ ।
यति बेलाको सबैभन्दा खतरा भनेको दूषित पानी नै हो । हरेक बस्तीमा पानीको परीक्षण गरी दूषित पाइएमा तत्काल प्रशोधन वा औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । अतः गर्मीमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
– कञ्चन शर्मा, काठमाडौं ।